Dowlada Somalia oo arin aan la filanayn kula kacday Saxiixeyaasha Jubbaland iyo IGAAD oo u soo gurmatay – idalenews.com
Manta waxaa Magaalada Doolow ee Gobolka Gedo ka dhacay arin aan laga filanayn Dowlada Fadaralka Somalia qaas ahaan Xukuumaadda Somalia ee u hurmuudka u yahay Raisulwasaare Dr Saacid.
Dowlada Somalia ayaa manta mid ka mid ah Shirkadaha Diyaaradaha ee ka shaqeeya Somalia isla markana rabtay in ay manta ka qaado Magaalada Doolow Masuliyinta Dagmoyinka Doolow, Baladxaawo, Luuq , iyo Gudiyada Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo iyo waliba saraakil ciidan uga hanjabtay in ay kala laban doonto shatiga hadi ay u duusho Gobolka Gedo oo ay qado wafuudaas ku wajahan Garbaharey.
Arinkaan ayaa waxaa uu wal wal badan ku abuuray Shirkadan oo ayadu horay u qadatay lacagti ay ku samayn lahayd dulimaadka Doolow ila Garbahareey ay ugu qadaysay Masuliyintaasi.
Shirkadan ayaa si kasta isgu dayday in ay arinkaan xal ka garaan isla markana ay wataan shaqadoodi balse waxaa arinkaas ku adkaystay Xukuumadda Somalia.
Masuliyiinti Shirkadaasi ayaa waxaay ku qasbanadeen in ay aqbaalan amarka ka soo baxay xukuumada Somalia waxaayna dib u soo celiyeen lacagtii ay horay uga qateen Masuliyiinta Maamul usamameynta Jubboyinka iyo Gedo.
Arinkaan ayaa waxaa uu sababay in ay caro weyn mujiyaan Boqolal Dadweyne ah oo wata Calanka Somalia oo ku sugnaa Garoonka diyaaradaha ee Garbaharey kuwaas oo u diyaarsana in ay soo dhaweyaan Masuliyiinta ka socota Gudiyaada Jubbaland iyo Maamulada Gobolka Gedo ayado ugu danbeyn ay shacabkaasi kala dareereen ka dib marki lo shegay in falkaani ay ku kacday Xukuumadi lo hanweynaa.
Dhanka kale waxaa arinkaasi ka gilgishay Saxiixeyaasha Jubbaland Gudomiyeyaasha Dagmoyinka Balad Xaawo, Luuq,Doolow iyi sarakiisha Hogaamisa Ciidamada Dowlada ee Gobolka Gedo kuwaas oo sugayay in ay si wada jir ah u garaan Magaalada Garbaharey bal si ay wadahadalo iyo isfahan ula garaan masuliyiin kale oo ku sugnayd Magaalada Garbaharey.
Marki ay arinkaasi dhacday Masuliyiinta Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo waxaay xariir la sameyeen Urur Goboleedka Igaad oo ayagu Gudiga Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo ka taagera Arimo badan waxaana Urur Goboleedka IGAAD balan qaday in uu masuliyiintaasi u soo diraayo Diyaarad gaysa Magaalada Garbahareey iyo waliba Diyaaradihi lagu soo qaadi laha Ergoyinka Gobolka Gedo ka imanaya waxaana gudigaasi lagu wada in uu maalinta bari ah garo Magaalada Garbaharey..
Dhacdadan ayaa waxaa si weyn uga Carooday qaybaha kala duwan ee bulshada Gobolka ayago ku tilmaamay tilaabo lagu diidan yahay wada hadal dhexmara Siyaasiyiinta Gobolka Gedo .
Isku soo wada duubo faidada kaliyah ee laga dhaxli karaa arinkaan waa si kala fogaansho ku timaada Gudiyada Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo Maamulka Kmg ah ee Kismaayo iyo Dowlada Somalia .
Fowsiyo Yuusuf Xaaji oo dib ugu soo laabtay dalka kana warbixisay Safarkii ay ku joogtay Dalalka Caalamka